ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ပြည်တော်ကအပြန်”
ကောင်းတယ်ဗျာ...ဂလိုဆို ကိုပေါက ခုတလော ပြည်တော်ပြန်လိုက်သေးသပေါကလေ... ဒီလိုမှန်းသိ ... အစိမ်းဝတ်တွေကို လက်တို့လိုက်ပါရဲ့..အဟေးဟေး....
ဒါနဲ့ စကားမစပ်ဗျာ...ဟိုအရင်က ငွေစက္ကူတွေဖျက်သိမ်းတဲ့ အကြောင်း လေးတွေ ကိုပေါ စတိုင်အတိုင်း ဗဟုသုတလေးတွေ ဟာသလေးတွေ စွက်ပြီး သရော်ဟန်းလေးနဲ့ ရေးပေးပါလားဗျာ...။ ဘာကြောင့်ဖျက်တယ် ဘယ်လို ဘာညာဆိုတာလေးတွေကောပေါ့..
ဘယ်မလဲ ပုံတွေ..ထုတ်ထုတ် ရှိသမျှအကုန်ထုတ်။
kar chin twe par twe nae ngar(five) see shin ko paw lar bya.
ကိုပေါရေ.. လာလည်သွားတယ်.. ကျွန်တော့်ဆီ လာလည်ပါဦး.. မျှော်နေမယ်
ကိုပေါ မြန်မာပြည်ပြန်တာ မဟုတ်ပါဘူး ... နော်.. ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ။
မြန်မာပြည်မပြန်ခင်ကတည်းက အဲဒီအကြောင်းတွေစဉ်းစားမိတိုင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ် ။ ဒီမှာ အပျင်းပြေဝယ်သောက်တဲ့ အအေးတစ်ဘူးဖိုးက သူတို့အတွက် ထမင်းတစ်နပ်စာတဲ့လား ။ နေမကောင်းဖြစ်မှ ကြက်သားစားရတာတဲ့လား ။ ငါ့လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံတစ်သောင်းလောက်ရှိရင် သေပျော်ပါပြီတဲ့လား ။ ပိုက်ဆံတစ်သောင်းကြောင့် တစ်အူတုံဆင်းမောင်နှမတွေ ဆွေမျိုးတွေ မခေါ်နိုင် မပြောနိုင် ဖြစ်ကြတယ်တဲ့လား ။ ဆိုးရွားလှတဲ့ ဘဝပေါင်းများစွာ .....တို့နိုင်ငံသာ ဒီလိုသာတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံသာဆိုရင် ဆိုပြီး တွေးမိတဲ့အခါတိုင်း...ဟင်း......
>>> Anonymous …. ၀ူးထွားဟားဟား လို့ ရယ်ပါ။
>>> နတ်ဆိုးလေးချစ်သူ …. ပြန်ဖြစ်ပါဘူးဗျား…. စိတ်ကူးနဲ့ ရူးကြည့်တာပါ။
>>> Anonymous (ကြည်) …. လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်ကျော်ကပဲ ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။
>>> Anonymous …. ခုံဖိနပ်ငါးစီးကိုပဲ ပိုင်သတော်မူတဲ့ ငါးစီးရှင်ကိုပါ ခင်ညာ။
>>> သက်ပိုင်သူ …. ဟုတ်ကဲ့။ အားတဲ့အခါ လျှောက်ခဲ့ပါမယ်။
>>> Thant …. မှန်ပါ၏။ ကျနော်ပြန်တာမဟုတ်ပါ။ လွတ်လပ်ပြီဆိုရင် တိုးတက်အောင် လုပ်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
"ကိုပေါရေ...ပြန်ကြရအောင်...နော်" .....သူများတွေက.. အဲ့ဒီလိုလုပ်ပေမယ့် ..ဒို့ ကိုပေါက မလုပ်ဘူး..(ဝင့်ကာထယ်...ဝင့်ကာထယ်။)....ဟုတ်တယ်ဟုတ်။
ကဗျာတွေ ရော ... ကွန်မန့်တွေ ရော ဖတ်ပီး ရီနေရပါတယ် ရှင့်။ (ရီစရာ ကြီးလို့ ပြောတာမဟုတ်ပါ ။ သဘောကျနှစ်သက်လို့ ရီရတယ် ပြောတာပါ)
တတ်လဲတတ်နိုင်တဲ့ ကိုပေါပဲ :P
>>>Anonymous…. ကျွန်ုပ်မူကား မရှိရှားမို့ ဗိုက်သားဝင့်ကာထည်…၀င့်ကာထည်။း-)
>>>မလေးရည်..... နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ ၀မ်းမြောက်ပါသည် မလေးရည်…….(ခင်မင်လျက်….ကိုပေါ)။
ပြည်တော်ပြန်သူတွေ အားလုံးက အဲဒီလိုတော့ စိတ်ပေါ့ပျက်ပျက် ဖြစ်နေမယ် မထင်ပါဘူး ကိုပေါရေ… နှလုံးသားထဲက ခံစားချက်တွေဟာ စာရွက်ပေါ်က ရေးချတာထက် အများကြီး ပြင်းထန်ပါတယ်… လွမ်းတယ်ဆိုတာ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ခံစားချက်မဟုတ်တာမို့လူကြားကောင်းအောင် ပရိတ်နာဖို့ ထက် ခံစားချက်တူသူတွေနဲ့ မျှဝေခံစားဖို့ ဆို ပိုမှန်မလားပဲ…
တန်ခူး.... တန်ခူးရေ.... အားလုံးမဟုတ်ပေမယ့် အများစုဟာ အဲသည်လိုပဲလို့ ယူဆမိပါတယ်။း-)
ဟုတ်သပေါ့..ကိုပေါရယ်...အများစုဟာဒီလိုပါပဲ... နောက်ပြီး ရွာက နေပြန်လာတဲ့ သူတယောက် စပြောတဲ့ စကားဟာ မဂ်လာဒုံကကောင်တွေ လည်ကတုံးလေးတွေနဲ့စုတ်ပြတ်နေတာပဲ !@#$%^&*(&^@%@% .....စသဖြင့်ပေါ့...ဖြစ်နေတတ်တာများတယ်...
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် ၂၀၀၉ ကလန်ဒါလေးရပါတယ် အီးမေလ်ကနေတစ်ဆင့်ပါ
Posted by chenaddy at 8:12 AM
နောက်တစ်ပုဒ်က အမှတ် ၂ လို့အမည်ပေးထားပါတယ်
ရွှေ မြို့တော်ပေါ် နေ၀င်သွားချိန်တိုင်း
Posted by chenaddy at 8:17 AM